Macalin Ole Gunnar Solskjær oo marmarsiyo cusub u sameeyay bar-bardhicii ay xalay la galeen kooxda Club Bruges – Gool FM
(Manchester) 21 Feb 2020.Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ka hadlay kulankii ay xalay bar-bardhaca la galeen naadiga Club Bruges.
Kooxaha Manchester United iyo Club Bruges ayaa xalay ku kala baxay bar-bardhac 1-1 ah, kulan qeyb ka ahaa tartanka xiisaha badan ee UEFA Europa League.
Dhinaca kale Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay in ciyaartoydiisa ay aad u xiiseynayaan inay u soo baxaan wareega xiga ee 16-ka tartanka UEFA Europa League.
Haddaba Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi uu bixiyay kaddib ciyaarta wuxuu ku sheegay:
“Waxay ahayd ciyaar aad u adag, Anthony Martial wuxuu dhaliyay gool cajiib ah waana ku faraxsanahay taas”.
“Kubadda loo isticmaalay kulankan ma aysan caawin kooxda, haddii aan weydiiyo mid ka mid ah ciyaartoyda, wuxuu dhihi lahaa inaad ku ciyaarto kubaddan ma ahan wax fudud”.
“Waa kubad kale oo aad u adag weyna adag tahay in lagu ciyaaro, oo waad isku dayi kartaa xitaa adiga, sidoo kale cimilada ma aysan fiicneyn, waxaa jiray roob iyo dabeylo”.
“Waxaan la soo laabanay bar-bardhac, waxaanan rajeyneynaa inaan dhameystirno howsha khamiista soo socota, waxaan eeganeynaa kulanka lugta labaad, haddii ay Club Bruges dooneyso inay bar-baro nala soo gasho si ay ugu soo baxdo garoonka Old Trafford waa inay dhaliso wax ka badan hal gool”.